पोखरामा जिल्लास्तरीय क्विज प्रतियोगिता हुने - Pokhara News
पोखरामा जिल्लास्तरीय क्विज प्रतियोगिता हुने
पोखरा न्यूज – ०१ ,फागुन । आगामी फागुन ११ देखि १५ गतेसम्म पोखरामा हुने ‘प्रभु पे क्यान इन्फोटेक–२०२० इन एसोसिएसन विथ वल्र्डलिंक’ को सन्दर्भमा जिल्लास्तरीय क्विज आयोजना गरिएको छ । तनहुँमा आइसिटी क्विज सम्पन्न भइसकेको छ । लमजुङमा फागुन ३ गते शनिबार क्विज हुने क्यान कास्कीका अध्यक्ष रुक्मागत भण्डारी विश्वासले जानकारी दिए ।
क्यान तनहुँको आयोजनामा हालै सम्पन्न क्विजमा अरनिको मावि प्रथम भएको छ । कन्काइ मावि द्वितीय र सत्यवती मावि तृतीय भएको क्यान तनहुँका अध्यक्ष टीकाराम पनेरुले जानकारी दिए । प्रथम, द्वितीय र तृतीयले क्रमशः १० हजार रुपैयाँ, ७ हजार रुपैयाँ र ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
यसैबीच, क्यान कास्कीद्वारा आयोजित ११औं संस्करणको क्यान इन्फोटेकको तयारीलाई तिब्र बनाइएको छ । यस पटक क्यान कास्कीले प्रदेशस्तरको सूचना प्रविधि मेला आयोजना गरेको हो । पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने इन्फोटेकले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आयोजकको विश्वास रहेको सचिव सेवक क्षितिजले बताए । मेलामा आइसिटीसंग सम्बन्धित करिब १ सय वटा स्टल रहनेछन् ।
इन्फोटेकलाई प्रभुपेले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । इन एसोसिएसन विथमा वल्र्डलिंक, प्लाटिनम स्पोन्सरमा एनसेल, गोल्ड स्पोन्सरमा ब्रर्दश विंथ कास्र्पस्काई र स्मार्ट सेल, सिल्भर स्पोन्सरमा भायानेट, लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशन र एस-पार्वर, डिजिटल पार्टनरमा ब्रेन डिजिट, नलेज पार्टनरमा निम एकेडेमी, अफिसियल इन्स्योरेन्स पार्टनरमा प्रभू इन्स्योरेन्स, रोबर्ट कम्पिटिसन स्पोन्सरमा कस्मिक कम्प्युटिङ सोलुसन न्युरोड, आइसिटी कन्फरेन्स स्पोेन्सरमा जेनेक्स अटोमेसन न्युरोड, फ्रि मेन्टिनेन्स क्याम्पमा इन्टेल ल्यापटप हाउस न्युरोड, सेक्युरिटी पार्टनरमा एम.बि. ट्रेडर्स न्युरोड, टाइपिङ कम्पिटिसन स्पोन्सरमा पाण्डे कम्प्युटर सप्लायर्स न्युरोडले साथ दिएका छन् ।
कोरोनाका कारण लक्षित कार्य पूरा गर्न सकिएन: मुख्यमन्त्री गुरुङ
२९ साउन २०७७
कोरोनाले भन्दा सवारी दुर्घटनाबाट बढीको मृत्यु
कतारमा रोजगारी गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या बढदै
पोखराका १ सहित गण्डकी प्रदेशमा थप ४ मा कोरोना पुष्टि
पोखरामा जुवाखालबाट १७ जुवाडे पक्राउ
पोखरामा ठुलो मात्रामा घरेलु मदिरा र कच्चा पदार्थ बरामद
पोखरामा पर्यटन क्षेत्रका मजदूरलाई राहत वितरण
सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै २ वटा वडा सिल गर्ने तयारीमा पोखरा महानगर
२६ साउन २०७७
पोखराका ३ सहित गण्डकीका ६ जनामा कोरोना पुष्टि
२८ साउन २०७७
पोखराका थप २ जनामा कोरोना पुष्टि
पोखरा-२७ वडा कार्यालयका अर्का कर्मचारीमा पनि कोरोना पुष्टि, थप एक कर्मचारीमा पनि कोरोनाको आशंका
पोखराका २ वडामा थपिए ११ कोरोना संक्रमित
२७ साउन २०७७
मेस्सी र रोनाल्डो खेल्लान् एउटै क्लबबाट ?
पोखरामा एक किलो गाँजा सहित २ युवा पक्राउ
गाँजा लिएर पोखरा आउदै गरेका २ युवा तनहुँमा पक्राउ
कोरोना पुष्टि भएपछि पोखराको सहकारी र बैंकको शाखा बन्द
नेपालमा कोरोनाबाट थप ४ को मृत्यु
नेपालमा एकैदिन थपिए ५ सय २५ कोरोना संक्रमित